မြနန္ဒာကမ္ဘောဇ(ခမ်းကောင်): August 2012
BLOGGER>> >VIEW ALL POSTS & TO READ THE LATEST POST>> >
Truth is defined in the Oxford dictionary as the quality orastate of being true. Truth inaconventional sense is subjective and in one way or another is judgmental. Truth is something what most people accepted, but it may not always be agreeable to all. For instance, when we seeagreen traffic lightacolour blind person may see it in another shade, and when most Asians regard durian fruit as havingapleasant smell, most Europeans may think that the smell is offensive.
How can we classify Truth?
• We can classify truth as conventional-truth where most people agree withaquality by convention; for example, we all accept that taking drugs is bad, but it may not be true to addicts who think it in another way.
• We can also classify truth conditionally, depending upon how one has become conditioned toaquality. Durian fruit is an example for the conditional-truth.
• There is another type of truth that is universal and is applicable to everybody. It is free of condition or convention. This type of truth is called "paramattha sacca" in Pali language, whilst conditional and conventional-truth is called "panatta sacca." Greed and anger, for example, areapart of human nature and it isauniversal-truth that they exist. Everyone has these qualities although they may vary in intensity from one to another.
They are the universal or ultimate-truths that can makeaperson to become noble or enlightened when they are understood and comprehended by the person. There are altogether four Noble Truths.
I. Dukkha sacca or the reality of suffering or unsatisfactoriness, imperfection and impermanence. Suffering exists in reality although we may try to hide it or justify it. The rich, the poor, the ugly, the beauty, the learned or an idiot, happiness or sadness, everything and everybody in this universe, in this conditioned-existence is Dukkha in one way or another. Some of these qualities may seem to be pleasant, but in reality they are all Dukkha inasense that they are impermanent; they are hidden byatransient happiness that can be followed by unsatisfaction or suffering when we have to part with them or do not obtain them.
II. Samudaya sacca or the cause of suffering. All the qualities of suffering have five common roots which are Avija, wrong seeing or lack of supra-mundane wisdom (i.e., the Four Noble Truths), Sankhara or reactions and responses to our senses, Tanha or cravings, Upadana or attachment, clinging, obsession and Kamma-bhava or volitional actions. These five causes result inacontinuous wandering in Samsara, the cycle of existences in which rebirths and deaths occur in sequence.
III. Nirodha sacca or the end of suffering. It is the cessation of all qualities of suffering and it is the ultimate perfection. It is the absolute peace and tranquillity that is eternal and is free from rebirth and death.
IV. Magga sacca or the path to the liberation from suffering. It is the eight-fold path comprising of right view (Samma ditthi), right thought (Samma sankappa), right speech (Samma vaca), right action (Samma kammanta), right livelihood (Samma ajiva), right effort (Samma vayama), right mindfulness (Samma sati) and right concentration (Samma samadhi).
Who discovered the Four Noble Truths?
Although the Noble Truths are present at all times they are not understood fully unlessateacher explains them. The Four Noble Truths are taught by the Buddha who became enlightened and came to know these realities by self inspection and analysis. A Samma Sambuddha is the enlightened human being who discovers the Four Noble Truths without any help and understands them perfectly and fully. Gotama Buddha contributed the knowledge of all the four Noble Truths which were lost at the time when he became enlightened.
Are the four Noble Truths taught by any other faiths ?
No, these truths are not known or understood fully by followers of any other faiths. A view or faith in Pali is called Ditthi and those who believe and follow the Four Noble Truths are called Right Viewers or Samma Ditthi, and the others are known as Wrong Viewers or Miccha Ditthi.
Some might consider that three out of the Four Noble Truths were already in existence before the time of the Buddha as suffering existed all the time and most of the causes of suffering were known before the time of the Buddha. They argued that Nirvana,aSanskrit term for what was thought to be equivalent to Nibbana was said to have existed before the Buddha.
If we examine these facts closely, suffering exists all the time and it would have existed at the time of the Buddha without any doubt. However, the suffering for being in the Samsara, or in other words having to wander endlessly in the round of rebirths and deaths is in itself, is impermanent. This knowledge is the authentic contribution of the Buddha because everybody at that time thought that the realm of Brahma gods (in the Samsara) was permanent and unity with the soul of the Brahma God was the liberation from Samsara.
Similarly, most of the causes of suffering may have existed before the time of the Buddha, but Bhava tanha, the craving for existence which wasasubtle form of clinging that made one to wander endlessly in the Samsara, was pointed out by the Buddha and by nobody else. Every teacher was preaching the doctrine of Atta, or eternal soul at that period and it was the Buddha who expounded the doctrine of Anatta, the absence of eternal soul and had gone against the main stream. Therefore, the Second Noble Truth is also the contribution of the Buddha.
Nirvana or Nibbana is the cessation of suffering andaliberation from wandering in the round of Samsara. This term is contributed by the Buddha, but some pointed out that it was in the Veda texts which were thought to have existed at the times of the Buddha. This term could be traced only in the Vedanta (the End of the Vedas) the school which gave organised and systemic form to the teaching of the Upanishads ( (philosophical compositions) ). This school is very much alive and nearly all the great Hindu religious teachers of recent centuries have been Vedantists of one branch or another. They regarded the Buddha as the ninth incarnation of Vishnu (one of the Hindu Gods) and added the teaching of the Buddha, the Majjhima Nikaya, in the Upanishad texts in the Middle Ages. This may be the reason why the word Nirvana was in the Veda texts and it could not have been in existence before the time of the Buddha.
If one may argue that Nirvana has the same meaning as the Hindu equivalent to liberation (Moksha), it is certainly not. The unity of the individual soul (Atman) with the one impersonal and absolute World-Soul (Brahman) is the liberation from Samsara in the Hindu sense. To achieve this highest bliss is the Hindu concept that is totally different from Anatta concept of the Buddhists. Therefore, the Third Noble Truth is also contributed by the Buddha. The Fourth Noble Truth is without any doubts, is solely contributed by the Buddha. There is no reason for having any suspicion on the authority of the Lord Buddha for the contribution of these Four Noble Truths. We must not be misled by any suggestion or any indication from anyone that the Buddha’s unique contribution is the Noble Eight-fold Path, and not the other Noble Truths.
Posted by A Shin Leknatharmi at 10:17 PM0comments
ပြန်လှန်ကျေးဇူး ရှိစဖူး ။
လမ်းမ၌ စွန့်ပစ်အပ်သောအမိုက်ပုံ၌ မွှေးလှိုင်သောရနံ့ရှိသော စိတ်နှလုံးကိုမွေ့ကလျော်စေတတ်သော ပဒုမ္မာကြာသည် ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာရသကဲ့သို့
ထို့အတူ အမှိုက်သဖွယ်ဖြစ်သော မျက်ကန်းပုထုဇဉ်တို့၏အလယ်၌ မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သာဝကများသည် ပညာဖြင့် အလွန်တင့်တယ်၏ ။ (ဓမ္မပဒ-ပုပ္ဖ၀ဂ်)
လောက၌ အမှိုက်ပံများသည် ရှိကြ၏။ အမှိုက်ပုံများဟူသည်မှာ ရွှံ့ညွန်များပင်ဖြစ်ကြ၏ ။
ရွှံ့ညွန်များအတွင်းမှ ပဒုမ္မာကြာ ပေါ်ပေါက်လာ၏ ။ ထို့ကြောင့် ရွှံ့ညွန်များသည် တန်ဖိုးမဲ့များဟူ၍
မဆိုထိုက်ပေ။ အကောင်းနှင့် အဆိုးသည် အစဉ်အမြဲ ဒွန်တွဲလျက်ရှိပါ၏။ အဆိုးကိုအကြောင်းပြု၍
အကောင်းသည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရ၏။ အကောင်းဟူ၍ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းသည် အဆိုး၏ကျေးဇူးကြောင့်ပင်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်အကောင်းအနေဖြင့် အဆိုးကိုကျေးဇူးတင်ရမည်ဖြစ်၏။ အကောင်းသည် အကောင်းအနေဖြင့် အဆိုးကိုစွန့်ခွာရမည်မဟုတ်ပေ။
ပဒုမ္မာရွှံ့ညွန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်၏ ။အကယ်၍ရွှံ့ညွန်သာ မရှိခဲ့လျှင် ပဒုမ္မာကြာသည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပေ။ ထို့ကြောင့်ပဒုမ္မာကြာအနေဖြင့် ရွှံ့ညွန်ကို ကျေးဇူးတင်ရမည်ဖြစ်၏။ ကျေးဇူးတင်လျှင် ကျေးဇူးဆပ်ဖို့လို၏။ ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းဟူသည်ကား
ရွှံ့ညွန်ကို မစွန့်ခွာဘဲ ရွှံ့ညွန်တောကို အလှဆင်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်၏။ အကယ်၍ မင်းများ၊အမတ်များ
သူဌေးသူကြွယ်များက ပဒုမ္မာကြာကို မြတ်နိုးပါသည်ဆိုသဖြင့် ပဒုမ္မာကြာသည် မင်းများ၊ အမတ်များ၊ သူဌေးသူကြွယ်များ နောက်သို့ကောက်ကောက်ပါ အောင်လိုက်သွားမည်ဆိုပါလျှင်
ရွှံ့ညွန်တောသည် များစွာပင် ကြေကွဲဝမ်းနည်း၍ ကျန်ရစ်ခဲ့ပေလိမ့်မည်။ ပဒုမ္မာကြာကလည်း ရွှံ့ညွန်တောကို ကျေးဇူးကန်းရာရောက်ပေလမ့်မည်။
ထိုနည်းတူပင် အမှိုက်တော၊ ရွှံ့ညွန်တောနှင့်တူသော လူမိုက်များကိုအကြောင်းပြု၍ ပညာရှိလူလိမ္မာများသည် ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်၏။အကယ်၍ သံဝေဂယူစရာ လူမိုက်များသာ မှရှိဘူးဆိုပါလျှင် ပညာရှိလူလိမ္မာများသည် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ထို့ကြောင့်လူမိုက်များသည် ပညာရှိလူလိမ္မာများအပေါ် များစွာကျေးဇူးရှိပါ၏။
ကျေးဇူးများသည့်အလျောက်လည်း ပညာရှိလူလိမ္မာများက လူမိုက်များအားကျေးဇူးဆပ်သင့်ပါ၏။
ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းဟူသည်မှာ လူမိုက်များအနေဖြင့် လူမိုက်ဘ၀မှလွတ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်၏။ အကယ်၍ပညာရှိလူလိမ္မာများက မိမိတို့ပညာရှိလူလိမ္မာများအနေဖြင့်
လူမိုက်များကို လျစ်လျူရှုပြီး မိမိတို့တစ်ကိုယ်ကောင်းဘ၀၌သာ ပျော်မွေ့နေမည်ဆိုပါလျှင် လူမိုက်တို့၏ဘ၀များသည် များစွာကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ပညာရှိလူလိမ္မာများကလည်း လူမိုက်များကို ကျေးဇူးကန်းရာရောက်ပေလိမ့်မည်။
ပဒုမ္မာကြာက ရွှံ့ညွန်တောကိုကျေးဇူးဆပ်ရာ၌ ရွှံ့ညွန်၏ အနံ့အသက်များ မိမိအပေါ် မကပ်ရော
က်စေဘဲ ရွှံ့ညွန်တောကို အလှဆင်သကဲ့သို့ ပညာရှိလူလိမ္မာများသည် လူမိုက်များကိုကျေးဇူးဆပ်ရာ၌လည်း လူမိုက်တို့၏စရိုက်များ မိမိတို့အပေါ်၌ မကပ်ရောက်စေဘဲ သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် လူမိုက်တို့၏ဘ၀ကို ကယ်တင်ထိုက်ပါပေ၏။ ထိုသို့ကယ်တင်ခြင်းသည်
ပညာဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းဟူ၍ ခေါ်ဆိုပါပေ၏ ။(ဦးရွှေအောင်- ဓမ္မပဒမှထုတ်နုတ်တင်ပြပါသည်။)
Posted by A Shin Leknatharmi at 2:05 AM0comments
လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် ထားရှိရမည့် သဘောထားသုံးမျိုး ။
၁။ ပထမ သဘောတရားမှာ မိမိ၏ဂုဏ်သိက္ခာကို မိမိကလေးစားတန်ဖိုးထားရခြင်းပင်ဖြစ်၏။
တစ်သက်လုံးဖုံးထားသမျှ ခါးကုန်းခါမှပေါ်ဟူသော အဖြစ်မျိုးမရောက်ရလေအောင် မိမိတို့၏
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လာသော မိမိတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာများ ၊မိမိတို့၏ မျိုးရိုး
စဉ်ဆက်ဂုဏ်သိက္ခာများကို ရိုသေလေးစား တန်ဖိုးထားသော သဘောထားဖြင့် လုပ်ငန်းများကို
လုပ်ဆောင်ရ၏ ။ဤသဘောထားကို အတ္တာဓိပတိ ဟုခေါ်ဆိုရ၏။
၂။ ဒုတိယထားရှိရမည့် သဘောထားမှာ လောကာဓိပတိဖြစ်ပါ၏ ။ လောကာဓိပတိဟူသည်
ပတ်ဝန်းကျင်လောက ကိုလေးစားခြင်းပင်ဖြစ်၏ ။ ပတ်ဝန်းကျင်လောကတွင် မိမိ၏မိသားစု၊
မိမိ၏ရပ်ရွာ၊ မိမိ၏မြို့နယ်၊ မိမိ၏နိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးပါဝင်၏ ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော်
လူသားအားလုံးပါဝင်၏ ။ အမှန်အားဖြင့်လူတစ်ယောက်သည် လူသားအားလုံးပါဝင်သော လူ့အဖွဲ့စည်း၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လေရာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းကောင်းပါမှ လူ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံး
ကောင်းပေမည်။ ထို့ကြောင့်လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ပတ်ဝန်းကျင်လောက၏ ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးအတွက် တာဝန်ရှိပါ၏။ သို့ဖြစ်၍ မိမိနှင့်ပတ်သက်ပြီး
ပတ်ဝန်းကျင်လောက၌ နစ်နာမှုမရှိရလေအောင် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားရခြင်းဖြစ်ပါ၏။
ပတ်ဝန်းကျင်၌နေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးဂရုမပြုသော လူသားမျိုးနွယ်စုတွေအနေနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ထိုလူသားမျိုးနွယ်စုကို မျက်ကွယ်ပြုမည်မှာအမှန်ပင် ။
၃။ တတိယ ထားရှိရမည့်သဘောထားသည် ဓမ္မာဓိပတိ ဖြစ်၏ ။
ဤ၌ ဓမ္မာဓိပတိသည် အရာကျယ်၏ ။ သံသရာတွင်းနှင့်လည်းပတ်သက်၏ ။ သံသရာလွန်နှင့်လည်း
ပတ်သက်၏ ။ လောကနှင့်လည်းပတ်သက်၏ ။လောကုတ္တရာနှင့်လည်း ပတ်သက်၏ ။လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီနှင့်လည်းပတ်သက်၏ ။လောကတစ်ခုလုံးနှင့်လည်းပတ်သက်၏ ။
ထို့ကြောင့်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ထားသော ယဉ်ကျေးမှုများ၊ ဓလေ့ထုံးစံများ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဤလောက ပစ္စက္ခ၌ ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးအတွက်
စိတ်ရင်းမှန် ၊စေတနာမှန်နှင့် လေးစားအပ်၏ ။ တမလွန်ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးအတွက် ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ထားသော ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာများ ၊ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ၊ ဆိုင်ရာမိမိယုံကြည်ကိုယ်းကွယ်ရာ ဘာသာတရားဓမ္မကျင့်စဉ်များကိုလည်း လေးစားလိုက်နာအပ်၏။
အနက်အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့် ဓမ္မဟူသည်သက်ရှိလူသားတွေအတွက် ကောင်းသောသဘောကိုဆောင်ပါမှ
ဓမ္မမည်ပါ၏။ မိမိတို့၏ အယူအဆအရသာ ကောင်းသည်ဟုသတ်မှတ်ထားရုံမျှနှင့် တော့ဓမ္မမမည်နိုင်သေးပေ။
ဓမ္မဟူသည် တဏှာ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိ တို့ကိုပါးသည်ထက်ပါးအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သော သဘောရှိမှသာ စစ်မှန်သောဓမ္မမည်၏ ။ ထို့ကြောင့်ဓမ္မာဓိပတိအရ တရားကိုလေးစားခြင်းဟူသည်မှာ လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရာ၌ မိမိ၏ တဏှာ၊ မိမိ၏ မာန၊ မိမိ၏ ဒိဋ္ဌိတို့ကို ပါးနိုင်င်သမျှပါးအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်၏ ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် မိမိ၏ အတ္တကို ပါးနိုင်သမျှပါးအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းပင်ဖြစ်၏။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အတ္တဟူသည် တဏှာဖြင့်စွဲသော အတ္တလည်းရှိ၏။ မာနဖြင့်စွဲသော အတ္တလည်းရှိ၏။ ဒိဋ္ဌိဖြင့်စွဲသော အတ္တလည်းရှိ၏ ။ ထို့ကြောင့်ပင် အတ္တပါးလျှင် တဏှာ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိ
တို့သည်လည်း အထိုက်အလျောက်ပါးသောကြောင့် ဓမ္မာဓိပတိအရ အတ္တပါးအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် တရားကိုလေးစားခြင်းပင် ဖြစ်၏ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်၏ ။
သက်ရှိလူသားတို့၏ ဘ၀သက်တမ်းတစ်လျှောက် လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဓမ္မာဓိပတိ
သဘော ပါဝင်မှုရှိမရှိကို သေခါနီးကာလ၌ နိမိတ်ပြ၏။ သေခါနီးကာလာတွင် ကမ္မနိမိတ်၊ ဂတိနိမိတ်၊ ပ၀တ္တိနိမိတ် တည်းဟူသောနိမိတ်သုံးပါးတွင် တစ်ပါးပါးတွင်မလွဲမသွေထင်ရ၏။
ကံသည် ဓမ္မနိယာမအရ ဇနေတိ သဒိသံပါကံ ဆိုသည့်အတိုင်း မိမိနှင့်တူသော အကျိုးကိုပေး၏။
ကံကိုလိမ်ညာ၍မရနိုင် ။ လူသားတို့အနေဖြင့် မိမိတို့လုပ်သောအမှုကို ပုထုဇဉ်တို့ဓမ္မတာအရ
အကောင်းချည်းဟူ၍ ထင်တတ်ကြလေရာ မိမိတို့၏အထင် မှန်သည် မမှန်သည်ကို သေခါနီးကာလ၌ သိရမည်ဖြစ်၏ ။
မိမိပြုခဲ့သော ကံသည် မိမိတို့အနေဖြင့် ကောင်းသည်ဟု လုပ်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်စေကာမူ သေခါနီးကာလ၌ သူ့သဘော သူဆောင်ကာ ကမ္မနိမိတ်၊ ဂတိနိမိတ်၊
ပ၀တ္တိနိမိတ် ဟူသော နိမိတ်သုံးပါးတို့တွင် တစ်ပါးပါးသော နိမိတ်ဖြင့် တူသောအကျိုးပေးသည့်
သဘောကို မလွဲမသွေပြမည်ဖြစ်၏။ ၀ရမ်းပြေးလူဆိုးတစ်ယောက်သည် ရာဇ၀တ်ဘေးမှ ပြေး၍
လွတ်ချင်လွတ်ဦးမည်။ အကုသိုလ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါက ဘယ်နေရာပြေးပြေး ယင်းအကုသိုလ်၏ ပြစ်ဒဏ်မှ
ပြေးမလွတ်နိုင်။ ထို့ကြောင့်ဤလောကတွင် မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုလုပ်လုပ် အကုသိုလ်လုပ်ငန်းများကို မလုပ်မိအောင် ၊ အတ္တစိတ်နည်းပါးအောင်၊ လောကကို မိမိအတွက် အသုံးမချဘဲ မိမိတို့၏ဘ၀ကိုသာ လောကအတွက်အသုံးချတတ်အောင် မြတ်ဗုဒ္ဓသည်
ဤတရားသုံးပါးကို ဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ၏ ။ (ဦးရွှေအောင်)
Posted by A Shin Leknatharmi at 9:09 AM0comments
ဘုရားရှင်သော်မှ နို့တစ်လုံးဖိုးသာကျေ.. ဟူသောစကားသည်....။
မည်သည့်ခေတ်က မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်က စတင်၍ သုံးနှုန်းခဲ့သည်ဟု မသိပါ။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအကြားတွင်
အမှန်တရားပမာ လက်ဆင့်ကမ်းပြောဆို သုံးနှုန်းရေးသားနေသော စကားတစ်ခုရှိသည်။
ယင်းကား-"ဘုရားရှင်သော်မှ နို့တစ်လုံးဖိုး သာကျေ"ဟူ၍ဖြစ်သည်။
မိခင်မေတ္တာဖွဲ့ သီချင်းတို့တွင်လည်း သည်စကားကို ကြားရဖူးပါသည်။
မိဘမေတ္တာဖွဲ့ စာစီစာကုံးတို့တွင်လည်း သည်စာသားကို တွေ့မြင်ရဖူးသည်။
လူကြီးမိဘတို့က သားသမီးတို့ကို မိဘကျေးဇူးသိရန် ဆိုဆုံးမသည့် အခါတွင်လည်း
"သည်အသုံးအနှုန်း" ကို ကိုးကားပြောဆိုတတ်ကြ၏။
(၁) ဘုရားရှင်သော်မှ မိခင်၏ ကျေးဇူးကို နို့တစ်လုံးဖိုးသာ ကျေအောင်
ဆပ်နိုင်တော်မူသည်မှာ "အမှန်တရား" ပေလော။
(၂) ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်က "သူသည် မိခင်၏ ကျေးဇူးကိ
ု နို့တစ်လုံးဖိုးသာကျေအောင် ဆပ်နိုင်သည်" ဟုမိန့်တော်မူခဲ့၍လော။
(၃) မယ်တော် "မာယာ" နှင့် မိထွေးတော် "ဂေါတမီ" တို့က ဘုရားရှင်သည်
သူတို့အပေါ် နို့တစ်လုံးဖိုးသာ ကျေအောင် ဆပ်နိုင်သည်ဟု ပြောခဲ့၍လော။
(၄) ထေရ၀ါဒ ပိဋကတ်တော်များတွင်
"ဘုရားရှင်သော်မှ နို့တစ်လုံးဖိုးကျေ" ဟူသော စာသားပါဝင်ပါ၏လော။
"သားတော် ဘုရား၊ သားတော်ဘုရားကို မယ်တော်က တိုက်ကျွေးခဲ့တဲ့ ပကတိနို့ရည်က
သားတော်ရဲ့ပကတိ ကိုယ်ခန္ဓာ ကြီးထွားပြီး အို၊ နာ၊ သေ ကိုပဲ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
သားတော်ဘုရားက မယ်တော်ကို တိုက်ကျွေးတဲ့ ဓမ္မနို့ရည်က
မယ်တော်ရဲ့တရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ကြီးထွားစေပြီး မအို၊ မနာ၊ မသေရာ မြတ်နိဗ္ဗာန်ကို ပေးပါတယ်။
သားတော် ဘုရားကို မယ်တော်က တိုက်ကျွေးခဲ့တဲ့ ပကတိနို့ရည်ထက်
သားတော်ဘုရားက တိုက်ကျွေးခဲ့တဲ့ ဓမ္မနို့ရည်က တန်ဖိုးကြီးလှပါတယ်။
သားတော်ဘုရားသည် မယ်တော်အပေါ်မှာ နို့ဖိုးအကြွေးမရှိတော့ပါ။
မိထွေးတော် "ဂေါတမီ" ကိုယ်တော်တိုင်က ဘုရားရှင်အား
ဘုရားရှင်သော်မှ နို့တစ်လုံးဖိုးကျေ ဟူသော စကားကို စတင်၍ ဖြန့်ဖြူးသူက ဖြန့်ဖြူးပြီး
မဝေဖန် မစိစစ်မူလျက် လွယ်လွယ်ပင် နို့သက်ခံခြင်း၊ ယူငင်သိမ်းပိုက်လက်ခံခြင်းမှာ
ကောင်းပြီ။ ဘုရားရှင်သည် မိထွေးတော် "ဂေါတမီ" အပေါ်တွင်သာ
ကျေးဇူးကို ကျေပြွန်အောင် ပေးဆပ်နိုင်ပါ၏လော။
မွေးမယ်တော်ဖြစ်သော "မယ်တော်မာယာ" အပေါ်တွင်လည်း
မြတ်စွာဘုရားသည် မယ်တော်ရင်းကိုလည်း နတ်ပြည်တက်၍
ဘုရားရှင်၏ အဘိဓမ္မာတရားကို နာကြားပြီးသောအခါ "မယ်တော်မိ နတ်သား" မှာ
"မိထွေးတော် ဂေါတမီ" အပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ မိခင်ကျေးဇူးများကို ကျေပြေစေရန်
အမြတ်ဆုံးသော လောကုတ္တရာနည်းအားဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်တော်မူခဲ့ပါ၏။
မိခင်ကျေးဇူးကို ဖွဲ့ဆိုရာတွင် အသုံးပြုသော
"ဘုရားရှင်သော်မှ နို့တစ်လုံးဖိုးသာကျေ" ဟူသောစကားကြောင့်-
(၁) ဤလောက၌ သူတစ်ထူး၏ ကျေးဇူးကို သိတော်မူရ၌
အနှိုင်းမဲ့ဖြစ်တော်မူသော "ဘုရားရှင်" အား ပြစ်မှား စော်ကားရာ ရောက်ခြင်း။
(၂) ဘုရားရှင်သော်မှ မိခင်ကျေးဇူးကို နို့တစ်လုံးဖိုးသာ ကျေအောင်ဆပ်နိုင်ရာ သာမန်ပုထုဇဉ်လူသားတို့အဖို့ မိခင်ကျေးဇူးကို ကျေပြေအောင်
မဆပ်နိုင်သည်မှာ အပြစ်ပြောဖွယ်မလိုဟူ၍ ခံယူကြခြင်း၊
မိခင်ကျေးဇူးကို ဆပ်ရကောင်းမှန်း မသိသူတို့အဖို့
ဆင်ခြေတက်စရာ၊ စောဒကတက်စရာ "စကား" တစ်ခုအဖြစ် အသုံးချနိုင်ခြင်း။
(၃) "မိခင်ကျေးဇူး ကျေပြေအောင်ဆပ်နည်း" ရှုိသည်ဟုပင် မသိတော့ခြင်း။.....
ဟူသော "ရလဒ်ဆိုးများ" ထွက်ပေါ်လာပါသည်။
"ရဟန်းတို့၊ မိမိအိမ်၌ မိဘတို့ကို ကျွေးမွေးပြုစု စောင့်ရှောက်ထားသော သားသမီးတို့သည်
ဗြဟ္မာ နှင့် အတူနေထိုင်သည်မည်၏။
မိမိအိမ်၌ မိဘတို့ကို ကျွေးမွေးပြုစု စောင့်ရှောက်ထားသော သားသမီးတို့သည်
"ရဟန်းတို့၊ ဗြဟ္မာဆိုသည်ကား အမိ အဖ တို့ကိုခေါ်သော အမည်တည်း။
အဝေးမှ သယ်ပိုးလာရသော ပစ္စည်းကိုပင် ခံယူထိုက်သည့် အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဆိုသည်ကား
အမိ အဖ တို့ကိုခေါ်သော အမည်တည်း။
အမိအဖတို့သည် သားသမီးတို့အား အလွန်ကျေးဇူးများသော ပုဂ္ဂိုလ်၊
ကြီးပြင်းအောင် စောင့်ရှောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်၊
ရင်သွေးကို နို့တိုက်၍ မွေးမြူပြုစုသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ ဖြစ်ကြသောကြောင့်တည်း"
ဘုရားရှင်သည် "မိဘတို့၏ ကျေးဇူး" ကို အထက်ပါအတိုင်း
အသိအမှတ်ပြု ဖော်ညွှန်းတော်မူခဲ့ပြီး မိဘကျေးဇူးကို ကျေပြေအောင် တုံ့ဆပ်နည်းကိုလည်း
(ဒုကအင်္ဂုတ္တိရ်။ ၄-သမစိတ္တ၀ဂ်၊ ဒုတိယသုတ်) တွင်
ရဟန်းတို့ အသက်တစ်ရာတမ်း၌ဖြစ်၍ အသက်တစ်ရာရှည်သောသူသည် (အသက်ထက်ဆုံး)
အမိကို လက်ျာပခုံးထက်၌ ထား၍ အဖကိုလက်ဝဲ ပခုံးထက်၌ ထား၍
ထိုပခုံးထက်၌ပင် အမိအဖတို့အား မကောင်းသော အနံ့အသက်ကင်းအောင်
အမွှေးအကြိုင် လိမ်းပေးခြင်း၊ ညောင်းညာပင်ပန်းခြင်း မရှိအောင် နှိပ်နယ်ပေးခြင်း၊
ရေးနွေးတန်လျှင် ရေနွေး၊ ရေအေးတန်လျှင် ရေအေး ချိုးပေးခြင်း၊
ခြေဆုပ်လက်နယ် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ကျွေးပြုစုရာ၏။
ရဟန်းတို့၊ အမှန်စင်စစ်အားဖြင့် အကြင်သူသည် သဒ္ဓါတရား ခေါင်းပါးသော
မိဘတို့ကို သဒ္ဓါတရား ရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေး၏။
ပညာမရှိသော မိဘတို့ကို ပညာရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေး၏။
အမိအဖတို့အပေါ်၌ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်ကို လုပ်သည် မည်၏။"
လောကုတ္တရာနည်းအားဖြင့် မိခင်ကျေးဇူးကို ကျေပြေအောင်
"ဘုရားရှင်သော်မှ နို့တစ်လုံးဖိုးကျေ" ဟူသော "ကြီးမားသော အမှား" အား
မင်းနန် (မော်ကျွန်း) အယူအမြင်မှန်ကန်ရေးမှ
Posted by A Shin Leknatharmi at 8:32 AM0comments
ဤလော၌ အမြဲတစေ ပူဇော်ရမည့်အရာ(၅)မျိုး..
၁။ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ။
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုသာမထိန်းသိမ်းပါက ဘယ်လူမျိုး ဘယ်တိုင်းရင်းသားမဆို မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာ မျိုးနွယ်သည်
အမြဲတစေ ပူဇော်ခြင်းဟူသည်မှာ အလေးအမြတ်ပြု၍ ထိန်းသိမ်းခြင်းပင်ဖြစ်၏။
အကယ်၍ ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်များက ဤလောက၌ လူပီပီပြင်ပြင်
နေထိုင်ရေးအတွက် သွန်သင်ပြသ ဆိုဆုံးမခြင်းမရှိခဲ့ပါလျှင် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဘာမျှခြားနားနေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဤအစဉ်အလာသည် မြတ်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်
မူသောအခါ၌ပင် အာစရိယ ဂုဏော အနန္တော အနေဖြင့် တည်ရှိနိုင်ဖြင်း ဖြစ်၏။
၃။ ကျေးဇူးကြီးမား မိဘများ...။
အကယ်၍သာ မိဘဟူ၍ မရှိဘူးဆိုပါလျှင် ကျွန်ုပ်တို့လူသားများ အနေနှင့်
ဤကမ္ဘာပြင်၌ မတည်ရှိနိုင်ကြောင်းမှာ အထူးပြောနေစရာမလိုတော့ချေ။
ထိုကြောင့် လူသားတိုင်းအတွက် မိဘသည် အမြဲတစေပူဇော်ရမည့်အရာဖြစ်၏။ အမှန်အားဖြင့် မိဘဟူသည် ပဓာနကျေးဇူးရှင်ဖြစ်၍ ကျန်ပူဇော်ရမည့်အရာလေးမျိုးမှာ အပဓာနကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြ၏။
၄။ မိမိမှတစ်ပါးသော အခြား လူသားများ ဖြစ်ကြ၏..။
လူဟူသည် မိမိတစ်ယောက်တည်းသာ အထီးကျန်နေနိုင်သော သတ္တ၀ါမျိုး မဟုတ်ပါချေ။ လူ့သမိုင်းတွင် လူ့ယဉ်ကျေးမှုဟူ၍ မပေါ်ပေါက်မီ ကာလကပင် စ၍ လူတို့သည် အသင်းအဖွဲ့နှင့် နေနြေုကသူများဖြစ်ကြလေရာ မိမိမှ တစ်ပါး အခြားသောလူသားများသည်လည်း လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက် ပူဇော်ရမည့်အရာများပင်ဖြစ်၏။ ပူဇော်ခြင်း ဟူသည် အလေးအမြတ်ပြု၍ တန်ဖိုးထားဖြင်းပင်ဖြစ်၏။ အခြားသောသူများကိုးတန်ဖိုးမထားတတ်သောသူသည် မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းတန်ဖိုးထားတတ်သောသူ မဟုတ်ပါချေ။
အမှန်အားဖြင့်လည်း ဤလောက၌ မငြိမ်းချမ်းနိုင်ကြခြင်းမှာ လူသားဟူသမျှကို အမြဲတစေ အလေးအမြတ်ထား၍ ပူဇော်ထိုက်သူများ အဖြစ် မခံယူနိုင်ကြသောကြောင့်သာဖြစ်၏။
၅။ ကျေးငှက်တိရိစ္ဆာန်များ အပါဝင် ပတ်ဝန်းကျင်ရုပ်လောကဖြစ်၏..။
ကျေးငှက်တိရိစ္ဆာန်များ အပါဝင် ပတ်ဝန်းကျင်ရုပ်လောက သည်လည်း လူသားများအတွက် အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရန် ကျေးဇူးများလှပါ၏။
ရုပ်လောကအား အလေးမြတ်ပြု၍ ပူဇော်ခြင်းဟူသည်မှာ သစ်ပင်ပန်းမန်များ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ရေတွင်းရေကန်များ တူဖော်ခြင်း၊ လမ်းများဖောက်လုပ်ပေးခြင်း၊
ခရီးသွားများ နားခိုဖို့ရန် တည်းခိုဇရပ်များ ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းဖြင်းဖြစ်ပါ၏..။
၁။ နိရ၀ေဿသပူဇာ = မိမိစွမ်းနိုင်ေသမျှ အားသွန်ခွန်စိုက်ပူဇော်ခြင်း..။
၂။ နိရန္တရပူဇာ = မခိုမကပ် အမြဲမပြတ်ပူဇော်ခြင်း..။
၃။ စိရံကာလပူဇာ = ပူဇော်မှုလုပ်ငန်း မပြီးဆုံးမချင်း ပူဇော်ခြင်း..။
၄။ သက္ကစ္စပူဇာ = ရိုသေလေးစားစွာပူဇော်ခြင်း..။
Posted by A Shin Leknatharmi at 9:41 AM0comments
Contact E-mail- ashinlekna@gmail.com Phone No.+917388868427
Leave your massage here.....
Namo Buddha Ya __/\___
Read to Think....
Some read to think - these are rare; some to write, these are common, and some to talk, and these form the great majority. (Charles Colton)
A Shin Leknatharmi
The young man who graduated yesterday, and stopped learning today will be uneducated tomorrow.
To visit another websites...
Important general new links
Edit Video lesson
Myanmar Gov office
MN astrology association Group
Guide to Mr bloger
7th of technology
Yangon Street Art (အနုပညာ)
Memory Stick မလို Hardisk မလို Gmail အကောင့် တခုရှိတာနဲ့ မည်သူမဆို 10 Gb free ရမယ်
နာမည်သိသော virus များ စက်ထဲမှာ မ Run နိုင်အောင် ပိတ်မယ်
Gtalk Virus ...
Gtalk သုံးပြီး တစ်ဖက်လူရဲ့ IP ကိုကြည့်ခြင်း
CHANGE BACKGROUND ..
တရားတော်များ ပြန်နာယူရန် နှင့် Downloadယူရန်..
ပိဋ္ဋကက် ၃ ပုံ PDFဖြင့်
တရားတော်များနာယူနိုင်ပါပြီ သီရဂူဆရာတော် ဓမ္မစေတီဦးကောသလ္လ မေတ္တာရှင် ဇ၀န တရားတော်များ MP3ဒေါင်းလော့(တရား) ဓမ္မဒူတ အရှင်စေကိန္ဒ ကသစ်ဝိုင်ဝိပဿနာ ဒဿနခရီးစင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဖြူးဆရာတော် ဖားအောက်တောရ ကောဝိဒ(မဇ္ဈိမ) မြန့်မာ့ထေရ်ရ၀ါရအသင်း ရွှေည၀ါဆရာတော် ဆရာတော်ဦးလက္ခဏ
မြနန္ဒာကမ္ဘာဇ(ခမ်းကောင်)မှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည် ။
DON'T WASTE THE TIME...!
ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍ - ဖရီးမြန်မာဗွီစီဒီ မင်းသီလမြန်မာဗွီဒီယို မြန်မာသီချင်းများ(မြန်မာဘလော့ မြန်မာရုပ်ရှင်ဗွီဒီယိုများ(ဘားမိကလပ်စစ့် မြန်မာ-နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းမျာ့း ရွှေအိုးမြန်မာရုပ်ရှင် မြန်မာသီချင်းများ(မဇ္ဇူရီ မြန်မာရုပ်ရှင်၊သီချင်းများ ရွှေအိမ်မက်မြန်မာဇာတ်လမ်းများ အာရှနိုင်ငံများမှ ဇာတ်လမ်းများ - ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊ထိုင်ဝမ် ဇာတ်လမ်းများ - နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်များ
မင်းအကြောင်းအိမ်မက် မိန်းမယူရင်စဉ်းစားကျ ချစ်သူရင်ခွင် ၀တ်မှုံ သီချင်းတပုဒ်မင်းဆိုလိုက် We are the world သူ့ကိုကျနော်ချစ်သည် မင်းမုန်းမှာစိုးတယ် မင်းလေးကိုသိပ်ချစ်လို့ မင်းသိလာမယ် ယုံကြည်ပေးပါ မျှော်လင့်မထားတဲ့အချိန် ကလေး လေး ချစ်ရက်နဲ့ ယုံကြည်ခြင်း ဆန္ဒတစုံ အလွမ်း ဖူးစာရှင် သဲသဲလှုပ် ဝေခွဲမရပါလား လိုက်ဖက်တဲ့ဘ၀ ငါ့ရင်ခွင်ကို အဆင်ပြေပါစေ Gtalk သူ ၀န်ခံလိုက်ပါ ရီးစားစာ တခါထဲချစ်ချင်လို့ပါ (၂) မိုး တိုးတိုးလေး ကြည်နူးခွင့် မုန်းမေ့ဖို့မလွယ် မလွယ်ပါကွယ် ကျောင်းသီချင်း ကြိုနေစေချင်တယ် ချစ်ကံဆိုး အပြုံးလေး နတ်သမီး လမင်းသို့ သီချင်းမဲ့ဂီတာ အမောပြေ ဆုတောင်းမယ် ဆုတောင်းမယ်(၂) ဟိုအရင်လို မိုးသည်းထဲမှာ
Download manager computer
လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် ထားရှိရမည့် သဘောထာ...
ဘုရားရှင်သော်မှ နို့တစ်လုံးဖိုးသာကျေ.. ဟူသောစကားသည...